Danbiyadii ugu danbeeyay ee ay al-Shabaab gaysteen oo xad gudub ku ah shareecada | warsugansomaliya.wordpress.com
warsugansomaliya / June 9, 2013
Xag-jiriinta al-Shabaab ayaa todobaadyadii la soo dhaafay qaaday weeraro waxuushnimo ah oo ka dhan ah dadka rayidka ah, iyaga oo afduubayay, gowracayay islamarkaana dhacayay Soomaalida, taa oo gabi ahaanba ka soo horjeedda shareecada Islaamka ee ay kooxdu sheeganayso in ay ilaaliso.
30-kii Maajo, al-Shabaab ayaa amar ku bixisay in lasii daayo lix kamid ah dagaalamayaasheeda oo lagu eedeeyay in ay farmasi ku yaala Baardheere ka dhaceen $6,000 oo doolar, waxaana loo xukmiyay in laga gooyo gacmahooda midigta ah.
“Waxaan kamid ahaa dad badan oo isugu soo ururay in ay xaadiraan ciqaabta ay mutaysteen lix kamid ah dagaalamayaasha al-Shabaab, anaga oo filaynay in laga jaro gacmaha midigta ah,” ayay tiri Yusra Nuur Cabdiraxmaan, oo ah 28 jir daggan Baardheere. “Haseyeeshee layaabka waxa uu ahaa, in mid kamid ah ragga kooxda [mas’uulka uga ah xukunka] Sheekh Aden Nuux uu ku dhawaaqay isaga oo samaacado isticmaalaya in lixda Mujaahidiinta ah lagu dhufan doon 39 karbaash oo ciqaab u ah dabbiyadooda.”
Waxa ay sheegtay in Nuux uu amray in 4,900 loo celiyo ninka farmasiga iska lahaa oo laftigiisa ahaa taageere al-Shabaab ah.
“Go’aankan sharaf darada ah oo wax lagu qoslo ah dhab ahaantii waa uu iga yaabiyay, waxaanan u qaatay in looga golleeyahay in lagu marin habaabiyo dadka, looguna dhiiro galiyo xubnaha kooxda in ay dhacaan xoolaha dadka iyo qoysaska,” ayay Cabdiraxmaan u sheegtay Sabahi.
Tani waa tusaalihii ugu dambeeyay oo muujinaya sida ay ciqaabta al-Shabaab u tahay kaligi talisnimo iyo munaafiqnimo, iyada oo xag jiriinta lagu helo dabmi aanan la marsiinayn ciqaabta ay mutaysteen, ayay tiri, iyada oo intaa ku dartay in xagjiriinta ay bilaabeen in ay ka aar gutaan shacabka Soomaaliyeed, iyaga oo afduubaya ama gawracaya dadka qaraabada la ah mas’uuliyiinta gobolada Gedo iyo Hiiraan.
Cabdiraxmaan ayaa ku boorisay xukuumadda Soomaaliya in ay soo afjarto falalka argaggaxa leh ee al-Shabaab ee ah afduubka, dilka, jirdilka iyo garaacidda.
Ka leexasho xukunka shareecada
Gobolka Hiiraan, ayay al-Shabaab soo saareen amarro aan wax xiriir ah la leheen shareecada si xubnaheeda ay u gaystaan dhac iyo gogoldhaaf, ayuu yiri taliyaha bilayska gobolka Hiiraan Gaashaanle Sare Isaaq Cali Cabdullaahi.
Qaadiyada al-Shabaab si buuxda uma fahansana fiqiga Islaamka iyo tacaaliinta nidaamka caddaaladda, ayuu yiri. Xukunadooda waa waxba kama jiraan maxaa yeelay waa kuwo dano siyaasadeed laga leeyahay, laguna saleeyay nidaam cadaaladeed aan sharci eheen, ayuu yiri.
Cabdullaahi ayaa al-Shabaab ku eedeeyay in odey da’ ah iyo wiil ay Maajo 22-keedii ku gowraceen Dudumo Qaris, oo 45 kiiloomitir waqooyi galbeed ka xigta Beledeweyne. Xagjiriinta ayaa sidoo kale tobonaan geella ka dhacay tuulada, ayuu yiri.
“Waxaa la gaaray waqtigii dhulkan al-Shabaab laga tirtiri lahaa, kuwaas oo lala xiriiriyo al-Qaacidda, laga saaro magaalooyinka iyo tuulooyinka kala duwan ee gobolka si loo soo afjaro caddaalad darada, dulmiga, iyo faquuqa [muwaadiniinta] lagu hayo,” ayuu Cabdullaahi u sheegay Sabahi.
“Waxaa la gaaray waqti aanu baahi u qabno in aan xaqiijino waxa aan tiigsanayno, maxaa yeelay dhowaan waxaan heli doonna xornimo, ay dadkeena u qalmaan maxaa yeelay waa dad sama fal badan,” ayuu yiri.
Axmed Cabdullaahi Cusmaan Inji, oo ah taliye kuxigeenkii hore ee xagga ammaanka gobolka, ayaa sheegay in labada qof ee la dilay ay kala ahaayeen adeerkiis Xuseen Aden Toore, oo 90 jir ahaa iyo wiilkiisa Toore. Dilaayaasha ayaa ku gowracay toorey, waxa ayna uga tageen iyaga oo dhiig baxaya ilaa ay ka dhintaan.
Wax dhib ah malahan ilaa inta ay qaadato, al-Shabaab maalin ayaa laga adkaan doonaa, hoggaamiyayaasheedana waxaa la hor gayn doonaa maxkamad militari si ay uga jawaabaan dambiyadooda xun xun, ayuu yiri Inji.
“Qaraxyada iyo gowraca masii socon doonaan,” ayuu yiri Inji. “Ciidamada xukuumadda ayaa ku dadaalaya in ay dhaqan galiyaan howlgaladooda militari si ay uga hor tagaan jidadka xun ee [al-Shabaab] ee loo diyaariyay in xanuun iyo ciriiri lagu galiyo dadka Soomaaliyeed, kuwaa oo lagu qasbay in ay nolosha ku liqaan qaraarka cadaabta iyo guuldarada.”
Masiirka 6 Soomaali ah oo la afduubay oo aan wali cadayn
Halka ay joogaan lix qof oo rayid ah ayaan wali la ogayn kadib markii rag la rumaysanyahay inj ay al-Shabaab yihiin at Maajo 23-keedii ku afduubeen gobolka Gedo.
Afduubka ayaa waxa uu kadhacay 40-ka kiiloomitir ee u dhaxeeya Ceel Waaq iyo Busaar, sida uu sheegay Guddoomiyaha Degmada Ceel Waaq Sahal Macalim Cali. Maamulka ayaa mar dambe helay raadadka gaari iyo mooto, ay xagjiriinta u adeegsadeen howlgalka ka hor inta aysan gubin oo ayan ka cararin, ayuu yiri.
Cali ayaa sheegay in maamulkiisa uu wali ugaarsanayo afduubayaasha.
Al-Shabaab ma aanay sheegan mas’uuliyadda afduubka, balse Cali ayaa sheegay in habka weerarka loo fuliyay uu lamid yahay khidadaha ay dhawaanahan al-Shabaab adeegsanayeen, kuwaa oo ay kamid yihiin qafaalasho, gowracid iyo dhicidda hantida dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay si ay cabsi ugu abuuraan shacabka daggan meelaha ay dowladdu maamusho.
Iyaga oo la taahaya guul darrooyinkii militari, ayay al-Shabaab isku dayayaan in ay kala qaybiyaan shacabka iyaga oo kicinaya khilaafaad iyo kacdoono qabaa’il oo kadhan ah xukuumadda, ayuu yiri, isaga oo intaa ku daray in dadka Soomaaliyeed aanay isku dhiibayn cabsi galin.
Ha ahaado xukunka shareecada ama sharciga caalamiga ah midna madhigayo afduub, ayuu yiri Cali. Marka dagaal lagu jiro, waxaa la dabaqaa sharciyada dagaalka ee ku aadan cadowga la qabtay, balse in dad rayid ah maxaabiis ahaan loo qabsado waa dulmi, sharci darro ah iyo waxaa la aqbali karin, ayuu yiri.
June 9, 2013 in Home, warka.
Maxaa ka jira Wararka Sheegaya in Meydka Kuxigeenkii Amiirka Al-Shabaab laga dhoofiyay Baraawe ?(Warbixin)
← DEG DEG AH: Qoys Ka Gooban 8 qofood Oo Gur Ku Dumay Mogdishu
Madaxda ugu sareysa Dowlada Federaalka Soomaaliya oo Maanta Muqdisho lagu talaalay(Daawo Sawirada) →